Sedlauncher: यो के हो र यो के को लागी | मोबाइल फोरम
Sedlauncher: यो के हो र यो के को लागी हो
डेनियल टेरासा | 13/09/2021 09:00 | इन्टरनेट
यो को संग्रहहरु मध्ये एक हो विन्डोज 10 कि प्रयोगकर्ताहरु को बीच सबैभन्दा विवाद उत्पन्न। यो साथी हो कि दुश्मन? यस पोष्ट मा हामी को बारे मा सबै कुरा को व्याख्या गर्ने कोशिश गर्नेछौं सेडलन्चर: यो के हो, यो के को लागी हो र यदि यो वास्तव मा यो बिना गर्न को लागी आवश्यक छ। कि हैन।
मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु अघि, यो व्याख्या गरीनु पर्छ कि हामी निम्न स्थान मा sedlauncher.exe कार्यक्रम पाउनुहुनेछ:
C:> कार्यक्रम फाइलहरु> rempl> sedlauncher.exe वा C:> कार्यक्रम फाइलहरु> rempl> sedlauncher.exe।
यो विन्डोज सेवा मा गति र ग्यारेन्टी गर्न को लागी डिजाइन गरीएको छ Windows 10 अपडेट प्रक्रिया।
1 Sedlauncher: यो के हो
2 कसरी Sedlauncher अक्षम गर्ने?
2.1 कार्य प्रबन्धक बाट Sedlauncher असक्षम गर्नुहोस्
2.2 Sedlauncher सेवाहरु असक्षम गर्नुहोस्
2.3 ब्लक विन्डोज प्याच सेवा फायरवाल को माध्यम बाट
3 अन्तिम निष्कर्ष
Sedlauncher: यो के हो
सबैभन्दा पहिले, यो भन्नै पर्छ Sedlauncher.exe यो माइक्रोसफ्ट द्वारा आशय को सबै भन्दा राम्रो संग बनाईएको थियो। यो को हिस्सा बन्यो विन्डोज १० अपडेट प्याकेज KB4023057। यसको सिर्जनाकर्ताहरुको लक्ष्य यो प्रक्रिया को लागी हाम्रो कम्प्युटर मा विन्डोज अपडेट सेवा को गति सुधार गर्न को लागी हो। खैर, ती संस्करण मा स्थापित छ कि मा विन्डोज 10। यी अपडेटहरुमा सामान्यतया मिडिया ड्राइभर, अडियो ड्राइभर, सर्विस प्याक, आदि सामेल छन्।
यो बिन्दु स्पष्ट गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ, किनकि जब कम्प्यूटर धेरै बिस्तारै काम गर्न थाल्छ यो तार्किक छ कि सोच्नुहोस् कि हाम्रो उपकरण एक बाट प्रभावित छ। मालवेयर वा भाइरस। तर होइन। Sedlauncher.exe फाइल डिजिटल रूप मा माइक्रोसफ्ट द्वारा हस्ताक्षरित छ।
यो अपडेट प्याच धेरै रोचक छ किनकि यसले यन्त्रमा डिस्क स्पेस खाली गर्न मद्दत गर्दछ जब यो विन्डोज अपडेटहरु लाई ठीक संग स्थापित गर्न को लागी पर्याप्त ठाउँ बाट बाहिर चल्छ। केहि पक्कै धेरै उपयोगी।
जे होस्, त्यहाँ केहि छ जुन ध्यानमा राखिएको थिएन जब यो फाइल भित्र तैनात गरीएको थियो Windows 10 अपडेट प्याकेज। जब Sedlauncher प्रक्रिया शुरू हुन्छ (जुन धेरै उपयोगी छ, सबै कुरा भन्नै पर्छ, किनकि यी प्रदर्शन को सुधार को लागी लक्षित अपडेट हुन्। अपरेटि system सिस्टम), हाम्रो कम्प्यूटर पूर्ण क्षमता मा काम गर्न बाध्य छ। र त्यो छ एक नकारात्मक भाग। जबकि sedlauncher.exe चलिरहेको छ, कुनै पनी अन्य प्रक्रिया हो कि हामी हाम्रो पीसी मा चलाउने कोशिश, एक फाइल फोल्डर खोल्ने जस्तै एक साधारण, हताश ढिलो हुनेछ।
यो किनभने यस्तो हुन्छ सबै सीपीयू संसाधनहरु Sedlauncher द्वारा लिईन्छ। त्यहाँ कुनै विकल्प छैन तर प्रक्रिया समाप्त गर्न को लागी प्रतीक्षा गर्न को लागी। अन्य शब्दहरुमा, यस समयमा हामी हाम्रो कम्प्यूटर को उपयोग गर्न सक्दैनौं।
यो पक्कै एक आदर्श स्थिति छैन। यही कारणले यो यो उपाय गर्न को लागी समाधान खोज्न आवश्यक छ। ती मध्ये केहि सीडलन्चर लाई सीधा अनइन्स्टल गर्ने को रूप मा कठोर।
कसरी Sedlauncher अक्षम गर्ने?
एक पटक जब हामी Sedlauncher को बारे मा आधारभूत जानकारी जान्दछौं (यो के हो र यो के गर्छ), विशेष गरी जान्दछन् कि यो माइक्रोसफ्ट को KB4023057 अपडेट प्याच को हिस्सा हो, यो समय छ कि यसलाई अक्षम गर्ने निर्णय गर्ने समय हो। यो प्रश्न को उत्तर दिन को लागी, यो आकलन गर्न को लागी आवश्यक छ कि यसको फाईदाहरु यसको हानिहरु भन्दा ठूलो हो कि हैन।
निम्न विधिहरू तिनीहरूले हामीलाई एक कुशल तरीका मा यो सेवा निष्क्रिय गर्न को लागी मद्दत गर्दछ कि यो प्रणाली मेमोरी को उपयोग संग हस्तक्षेप गर्दैन।
कार्य प्रबन्धक बाट Sedlauncher असक्षम गर्नुहोस्
यो एक प्रक्रिया असक्षम गर्न को लागी सबैभन्दा सजिलो र सबैभन्दा सीधा तरीका हो। निस्सन्देह, हामी यसलाई sedlauncher.exe प्रक्रिया को अन्त्य गर्न को लागी सेवा गर्न सक्छौं, किनकि तपाइँको सिस्टम मा चल्ने सबै प्रक्रियाहरु र सेवाहरु बाट विनियमित गर्न सकिन्छ। कार्य प्रबन्धक.
Sedlauncher लाई निष्क्रिय वा असक्षम गर्न को लागी तल दिईएका चरणहरु पालना गर्नुहोस्:
चरण १: पहिले, तपाइँलाई खोल्न को लागी छ "चलाउनुहोस्" संवाद बक्स हाम्रो प्रणाली मा "विन्डोज की + आर" वा स्टार्ट मेनु बाट थिचेर। हामी विन्डोज आइकन मा क्लिक गर्न सक्छौं कि हामी टास्कबार को तल्लो बायाँ कुनामा छ। त्यहाँ हामी खोज पट्टी मा "निष्पादित" लेख्नुहोस् र निष्पादन संवाद खोल्नुहोस्।
चरण २: हामी टास्क प्रबन्धक सुरु गर्छौं। यो गर्न को लागी, रन संवाद बक्स मा हामी लेख्छौं पाठ 'taskmgr' र त्यसपछि हामी प्रेस "स्वीकार गर्न".
चरण 3: एक पटक विन्डोज टास्क प्रबन्धक मेनु, हामी मेनू पट्टी को तल मात्र विकल्प को एक सूची देख्छौं। यो सूची मा तपाइँ चयन गर्न को लागी छ "प्रक्रियाहरू" र त्यहाँ विकल्प छान्नुहोस् «विन्डोज सुधार सेवा"।
चरण 4: यो विकल्प मा हामी दायाँ माउस बटन संग क्लिक गर्नुहोस् र चयन गर्नुहोस् "गृहकार्य समाप्त गर्नुहोस्"।
चरण 5: समाप्त गर्न को लागी, हामी टास्क प्रबन्धक बाट बाहिर निस्कन्छौं हामी प्रणाली रिबुट गर्दछौं। यो बनाइएको परिवर्तन लागू हुनेछ।
यो समाधान सबैभन्दा कट्टरपन्थी हो, किनकि यो कलम को एक स्ट्रोक संग हाम्रो उपकरण मा सबै Sedlauncher कार्यहरु लाई समाप्त गर्दछ। गयो ढिलो सञ्चालन को क्षण हो, तर यो पनि प्रणाली सुधार गर्न को लागी अपडेट। यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि यो धेरै धेरै छ तपाइँ निम्न विधि को कोशिश गर्न सक्नुहुन्छ:
Sedlauncher सेवाहरु असक्षम गर्नुहोस्
यो विकल्प को लागी, तपाइँ विन्डोज सेवा प्रशासन उपकरण को माध्यम बाट कार्य र सेवा को गुणहरु लाई परिवर्तन गर्न को लागी छ। यो एक कम घुसपैठ सीपीयू मंदी समस्या Sedlauncher को कारण समस्या हल गर्न को लागी हो। यो कसरी यो गर्नु पर्छ:
चरण १: अघिल्लो विधि जस्तै, हामी खोल्न "चलाउनुहोस्" संवाद बक्स हाम्रो प्रणाली मा विन्डोज + आर कुञ्जीहरु संग वा स्टार्ट मेनू बाट वा टास्क बार को तल्लो बायाँ कुनामा स्थित विन्डोज आइकन मा क्लिक गरेर। हामी खोज पट्टी मा "कार्यान्वयन" टाइप गर्नुहोस् र कार्यान्वयन संवाद सुरु गर्नुहोस्।
चरण २: पाठ जुन हामीले संवाद बक्समा प्रविष्ट गर्नु पर्छ यो हो: 'services.msc '। एक पटक यो गरिसकेपछि, हामी बटन थिच्नेछौं "स्वीकार गर्न"। यस बिन्दुमा, प्रश्न पर्दा मा देखा पर्न सक्छ कि हामी प्रशासक को रूप मा चलाउन चाहन्छौं। त्यस अवस्थामा हामी हो जवाफ दिनेछौं र प्रक्रिया जारी राख्नेछौं।
चरण ३: तल खुल्ने विकल्पहरुको लामो सूची मा, हामी मध्ये एक को लागी हेर्छौं "विन्डोज सुधार सेवा"। यसमा क्लिक गरेर हामी विकल्प छान्नुहोस् «गुणहरू».
चरण २: ट्याबमा "सामान्य" मेनु मा कि विन्डो को शीर्ष मा देखिन्छ, हामी तल को बारे मा एक नयाँ ड्रप डाउन मेनु को लागी हेर्छौं «सुरु प्रकार। त्यहाँ हामी बस विकल्प छान्नुहोस् "अक्षम" र हामी ठीक क्लिक गरेर मान्य।
ती चार चरणहरु पूरा गरे पछि हामी कम्प्युटर पुनः सुरु परिवर्तनहरू लागू गर्न।
ब्लक विन्डोज प्याच सेवा फायरवाल को माध्यम बाट
Sedlauncher: यो के हो, यो के को लागी हो र यसलाई कसरी अक्षम गर्ने
Sedlauncher को नकारात्मक प्रभावहरु लाई शून्य गर्न को लागी अर्को सम्भावित विकल्प यो विरुद्ध एक सुरक्षा फायरवाल को उपयोग गर्न को लागी हो। यो कसरी हामी अगाडि बढ्नु पर्छ:
चरण १: पहिले हामी मेनूमा जान्छौं "सुरु" जुन हामी स्क्रीन को तल्लो बायाँ कुनामा स्थित विन्डोज आइकन को माध्यम बाट पहुँच हुनेछ। यो गर्न को लागी अर्को तरीका हाम्रो कीबोर्ड मा विन्डोज कुञ्जी थिचेर छ। खोज बाकस मा हामी लेख्दछौं "विन्डोज डिफेन्डर फायरवाल" र हामी यसलाई चयन गर्दछौं।
चरण २: अर्को, बायाँ मेनु मा हामी मा क्लिक गर्नुहोस् "उन्नत कन्फिगरेसन"। हामी "प्रशासक को रूप मा चलाउनुहोस्" को विकल्प संग बक्स प्राप्त गर्न सक्छौं। यदि हो भने, हामी हो जवाफ दिनेछौं।
चरण 3: फिर्ता बाँया पट्टि मेनू, हामी चयन गर्नुहोस् "बहिर्गमन नियम" र त्यहाँ विकल्प "नयाँ नियम" कि हामी विन्डोज फायरवाल विन्डो को माथिल्लो दाहिने भाग मा पाउनेछौं।
चरण 4: एक पप-अप विन्डो विभिन्न विकल्पहरु संग हाम्रो आँखा को सामु देखा पर्नेछ। यसमा हामी मध्ये एक छान्नुहोस् "कार्यक्रम" र हामी थिचेर मान्य "पछी".
चरण 5: कार्यक्रम मार्ग अन्तर्गत, हामी बटन क्लिक गर्नुहोस् "जाँच"। यो सीधा को स्थान को लागी हामीलाई नेतृत्व गर्नेछ "विन्डोज प्याच सेवा" हाम्रो पीसी बाट। सही ठाउँ जहाँ हामी के खोजिरहेका छौं भेटिन्छ सी:> कार्यक्रम फाइलहरु> repl.
चरण:: अन्तिम कार्यहरु हामी प्रदर्शन गर्नुपर्छ भनिन्छ फाइल चयन गर्न को लागी "Sedvsc.exe" र तल दिईएको प्रमाणिकरण विकल्प मा क्लिक गरेर लक पूरा गर्नुहोस्। तब यो मात्र यो नयाँ नियम को लागी एक नाम असाइन गर्न को लागी छोडिनेछ, मा क्लिक गर्नुहोस् "अन्तिम रूप दिनुहोस्"।
यो हुन सक्छ कि, Sedlauncher निष्क्रिय पछि यो विधि पछी, प्याच स्वचालित रूप बाट फेरि हाम्रो कम्प्यूटर मा डाउनलोड गरीन्छ। यदि यो हुन्छ, हामी गर्नै पर्छ हाम्रो विन्डोज फायरवाल पुन: कन्फिगर गर्नुहोस् वा एक एंटीवायरस डाउनलोड गर्नुहोस् यसलाई रोक्न सक्षम। यदि ब्लक प्रभावी छ, यो अब हाम्रो पीसी मा निष्पादित गर्न सकिन्छ।
अब जब तपाइँ ब्लक वा Sedlauncher को स्थापना रद्द गर्न को लागी तीन सबैभन्दा प्रभावी र सुरक्षित तरीकाहरु थाहा छ, त्यहाँ अझै पनी सबैभन्दा कठिन भाग छ: निर्णय गर्नुहोस् त्यसो गर्न। यो यो हैन कि यो कार्यक्रम अक्षम गरेर केहि निराशाजनक विनाश तपाइँको कम्प्यूटर को लागी हुनेछ, तर तपाइँ सजग रहनु पर्छ कि तपाइँ यो प्रदान गर्ने कार्यहरु लाई गुमाउनुहुनेछ, जुन तपाइँको पीसी को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन संग सम्बन्धित छ।
जे होस्, यदि तपाइँ Sedlauncher बाट छुटकारा पाउन अनिच्छुक हुनुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको कम्प्यूटर ढिलो चलाउन सक्ने सम्भावना को सामना गर्नुहुनेछ। कहिले काहिँ यो "पक्षाघात" हुन्छ। र यो एक कार्यक्रम हो कि डिस्क ठाउँ को एक धेरै उपभोग गर्दछ। कहिलेकाहीँ CPU को १००% सम्म।
जीवनमा सबै कुरा जस्तै, यो बारे मा छ जोखिम र पुरस्कार तौल। यो सामान्यतया निर्णय गर्ने प्रक्रिया हो: तपाइँ केहि पाउन केहि गुमाउनुहुन्छ। सिद्धान्त मा अझ राम्रो। प्रत्येक व्यक्ति, त्यो हो, प्रत्येक विन्डोज प्रयोगकर्ता, एक संसार हो। सबैलाई निर्णय गरौं कि उनीहरु के सोच्छन् कि उनीहरुको लागी सबैभन्दा राम्रो हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » इन्टरनेट » Sedlauncher: यो के हो र यो के को लागी हो
पीसी को लागी पोकेमोन एकता: यो सम्भव छ?
कसले थाहा पाउँदछ कि कसले मेरो लुकाइएको व्हाट्सएप स्थिति देख्छ